Fomba hanovana rakitra PDF ho Word amin'ny safidy samy hafa | Famoronana an-tserasera
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ny nanjo anao fa manana rakitra PDF ianao, angamba iray izay noforoninao ny tenanao. Ary rehefa mandeha mijery azy ianao dia hitanao fa misy tsipelina diso. Na mbola ratsy kokoa aza, fa diso ny fanovana nataonao, na ny ampahany tsy hita ao aminy. Ary ny olana dia tsy manana Word ianao, izany hoe tsy azonao atao ny manitsy azy. Manao inona no ianao izao? Azo ovaina ho Word ve ny rakitra PDF? Eny ny valiny dia eny.
Androany dia te hanampy anao izahay ary, raha sendra izany toe-javatra izany ianao amin'ny toerana tokony hisy anao ovay ny rakitra PDF ho WordFantaro ireo fitaovana azonao ianteherana satria eny, misy maromaro, ny sasany maimaim-poana ary ny hafa kosa aloa.
1 Fanazavana alohan'ny hamadihana rakitra PDF ho Word
2 Avadiho ho rakitra ny rakitra PDF: ny fitaovana tsara indrindra
2.1 Hanova rakitra PDF ho Word amin'ny Internet
2.1.4 Niova an-tserasera ho PDF ho ODT
2.2 Fandaharana hanovana rakitra PDF ho Word
2.2.2 Avadiho ho PDF ny rakitra PDF: Adobe
Fanazavana alohan'ny hamadihana rakitra PDF ho Word
Alohan'ny handehananao hanome anao ireo safidy hafa misy hanovana PDF ho lasa Word, dia tsy maintsy jerenao ny andiany antsipirihany izay, indraindray, tsy nohenoina ary ny vokany dia mety ho ratsy kokoa noho ny teo.
Ary dia, maro amin'ireo fitaovana manova PDF ho Word no manana olana amin'ny tsy fanamboarana ny zava-drehetra. Raha atao teny hafa, dia afaka mahita teny miaraka ianao, tapaka ny andian-teny, sisin-tany ratsy, na koa ny olana amin'ireo sary nafangaronao tamin'ny antontan-taratasy.
Tsy azo ialana izany. Misy fitaovana sasany mahomby kokoa noho ny hafa (mazava ho azy fa ny karama no mahazo ny vokatra tsara indrindra).
Midika inona izany? Raha vantany vao navadinao io antontan-taratasy io dia mamporisika anao izahay handinika azy io tsara mba hisorohana ny lesoka na olana fanovana.
Avadiho ho rakitra ny rakitra PDF: ny fitaovana tsara indrindra
Ny PDF dia tahirin-kevitra iray izay ahorona ny zava-drehetra arakaraka ny sisiny ary omena famaranana "matihanina". Noho izany, ny fanovana azy ireo dia sarotra tokoa, ary betsaka kokoa ny mamadika azy ireo amin'ny endrika hafa toa ny Word na ny iray amin'ireo be mpampiasa indrindra, ODT (Ho an'ny LibreOffice na OpenOffice). Na izany aza, tsy azo atao izany, raha ny marina, manana fitaovana maromaro azonao atao ianao hanatanterahana izany.
Izahay, Nozarainay ho fizarana izy ireo arakaraka ny tianao hampidinana programa (na maimaim-poana na aloa), na te hanao izany amin'ny Internet ianao.
Hanova rakitra PDF ho Word amin'ny Internet
Raha ny fanovana rakitra PDF ho Word amin'ny Internet no tadiavinao nefa tsy mila mampidina na inona na inona amin'ny solosainao na mividy ianao, ny safidy azonao dia ny manao azy amin'ny Internet. Mazava ho azy, midika izany fa tsy maintsy mampakatra ny antontan-taratasinao amin'ny Internet ianao, ary indraindray, mankany amin'ny pejy ivelany izay tsy fantatrao akory izay ataon'izy ireo amin'ny antontan-taratasinao. Noho izany, raha zavatra tena manan-danja sy miafina izy io, dia tsara kokoa ny misafidy fitaovana hafa.
Safidy inona avy no atolotray?
Nihevitra ve ianao fa tsy afaka nanampy anao hamadika an'io PDF io ho Google i Google? Azonao atao izany. Ny hany kaontinao dia ny manana kaonty. Ankehitriny, ao amin'ny Google Drive, mila mampakatra ny rakitra PDF izay anananao ianao.
Aorian'ny nampidirina azy, ny bokotra eo ankavanana dia hanome anao ny safidy "Misokatra miaraka". Ary rehefa omenao dia hivoaka izy ireo safidy toa ny PDF na, amin'ity tranga ity, Google Docs. Amin'izany fomba izany dia hanolotra anao antontan-taratasy azo ovaina izy, satria ho tompon'andraikitra tamin'ny famadihana azy izy io ary noho izany dia azonao atao ny mitahiry azy amin'ny Word (na amin'ny endrika hafa) hahafahanao miasa miaraka aminy, manamboatra ny fanovana mety sy hamaha ireo olana mety hananan'ilay pdf.
Azonao atao aza ny misintona azy amin'ny solosainao ary miara-miasa aminy raha tsy amin'ny Internet. Ary avy eo amin'ny famafana ireo antontan-taratasy ireo dia mety (satria mampiasa habaka ao anaty rahona ianao ary afaka mamafa izay tsy tianao ho eo).
PDFToWord dia pejy an-tserasera antoko fahatelo izay manolotra anao fitaovana hanovana rakitra PDF ho Word. Ny hany mila ataonao dia ny mitady ity safidy ity, mampakatra ny antontan-taratasy ary miandry ny fiovam-po.
Iray amin'ireo izay "atokisantsika", satria eto ianao dia tsy afaka miditra amin'ilay antontan-taratasy izay ampakarinao hamafana azy raha vantany vao navadinao izy. Ankoatr'izay, ny valiny dia misy kalitao tsara.
Pejy iray hafa izay afaka mamadika haingana ireo PDF anao ho Word. Miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny teo aloha izy, izany hoe mampakatra ny antontan-taratasy amin'ny mpizara ny pejy ary mikarakara ny famadihana azy mba hahafahanao misintona azy avy eo.
Niova an-tserasera ho PDF ho ODT
Mitovy amin'ireo teo aloha, fa misy fanampiny. Ary izany ve Raha tsy mampiasa Word ianao, fa mila antontan-taratasy azo ovaina, toa ny ODT, azonao atao amin'ny alàlan'ity fitaovana ity.
Izy io dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra hanovana ny PDF ho Word amin'ny Internet. Mba hanaovana izany, toy ireo teo aloha, tsy maintsy mampakatra ny rakitra PDF ianao ary miandry ny hamoahana azy hanombohana ny fiovam-pony.
Fandaharana hanovana rakitra PDF ho Word
Raha tianao ny mametraka programa amin'ny solosainao, na satria heverinao ho azo antoka kokoa izany, satria mila manova ny pdf amin'ny fomba iray ianao, na satria tianao kokoa izany, dia ireto ny safidy azonao ampiasaina:
Raha mampiasa Word ianao dia tokony ho fantatrao fa ilay programa dia manome antsika safidy hanovana rakitra PDF. Ka tsy mila mitady any ivelany ianao. Ary ahoana no anaovana azy? Tsara izany sokafy ny Word ary, ao amin'ny menio File, azonao atao ny mangataka manokatra ny PDF. Mazava ho azy fa hahazo fampitandremana ianao fa raha manokatra azy amin'ny Word izay hataony ianao dia mamadika azy ho azy ary ho azonao ahodina.
Mazava ho azy fa mety ny hamerenanao azy ity mba tsy hisy na inona na inona nifindra tao amin'ilay tranokala na hitanao miaraka amin'ny teny miaraka aminao.
Avadiho ho PDF ny rakitra PDF: Adobe
Eny, Adobe dia iray amin'ireo programa malaza indrindra, ary azonao atao ny mamadika PDF ho rakitra Word mora foana. Raha ny marina dia afaka manova PDF aza izy io nefa tsy mila manova azy, izay manampy amin'ny famahana ireo olana sendra anao ireo nefa tsy mila manitsy sy mametraka ny antontan-taratasy intsony.
Manokana, Izahay dia miresaka momba ny Acrobat DC, ny programa feno indrindra avy amin'ny Adobe. Mazava ho azy fa tsy maimaim-poana (manana kinova fitsapana fotsiny ianao) ka raha te hampiasa azy ianao dia tsy maintsy mividy azy.
Amin'ity tranga ity dia manana programa hafa ianao hanampy anao hanova ny rakitra PDF ho Word. Ankoatr'izay, azonao atao koa manova, manasonia, manambatra antontan-taratasy ary miaro azy ireo miaraka amin'ny teny miafina na mba tsy kopia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Ahoana ny fanovana rakitra PDF ho Word